Ukuhambela iziQhingi zaseCook | Izindaba Zokuhamba
Ukuhambela iziQhingi zaseCook
UMariela Carril | | Iziqondiso, Iziqhingi
Yeka iziqhingi ezinhle ezikhona emhlabeni! Ikakhulu kufayela le- ENingizimu Pacific, umhlaba wezindaba eziningi zeJack London engizifunde ngisemncane. Lapha, kule ngxenye yomhlaba, kukhona, isibonelo Iziqhingi zase Cook.
Iqembu elincane leziqhingi eduzane naseNew Zealand yamasimu aluhlaza noluluhlaza, amanzi afudumele namasiko asePolynesia. Ingabe sizitholile?
1 Iziqhingi zase Cook
2 Ezokuvakasha eziqhingini zaseCook
Njengoba sishilo, iyi- iziqhingi zeziqhingi eziyi-15 ehlanganisa indawo ephelele yamakhilomitha-skwele angu-240. Iziqhingi zaseCook kuhlotshaniswa neNew Zealand, leli lizwe lisebenza ngezindaba zalo zokuvikela nezamazwe omhlaba, yize isikhathi esithile manje sezizimele ngokwengeziwe. Isikhumulo sezindiza samazwe omhlaba kanye nenani labantu elikhulu kakhulu lisesiqhingini saseRarotonga futhi iziqhingi eziphila ngale ndawo ukuthekelisa izithelo, amabhange aselwandle, ukulima amapharele nezokuvakasha.
Babizwa ngoCook ngemuva kwetilosi laseBrithani, uJames Cook odumile, owafika okokuqala ngo-1773, yize leli gama walinikwa ngekhulu elilandelayo. Izakhamuzi zokuqala zazikhona Abantu basePolynesia baseTahiti Kepha kubathathe kancane abaseYurophu ukufika nokuzinza ngoba abaningi babulawa ngabomdabu. Kwaze kwaba ngawo-20 wekhulu le-XNUMX lapho amanye amaKristu eba nenhlanhla engcono, yize ngalelo khulu leminyaka iziqhingi zaba yi isitobhi esithandwa kakhulu sabadobi bemikhomo ngoba ahlinzekwa ngamanzi, ukudla nezinkuni.
Ngo-1888 abaseBrithani babaguqula baba yi-a ukuvikela, ngaphambi kokwesaba ukuthi iFrance izobahlalisa njengoba yayivele iseTahiti. Ngo-1900 lezi ziqhingi zazixhunywe uMbuso WaseBrithani, njengesandiso samakoloni aseNew Zealand. Ngemuva kweMpi Yesibili, ngo-1949, izakhamizi zaseBrithani zaseCook Islands zaba izakhamizi zaseNew Zealand.
Iziqhingi zaseCook ngaleso sikhathi ziseSouth Pacific Ocean, phakathi kweAmerican Samoa neFrench Polynesia. Yeka indawo enhle! Zihlukaniswe ngamaqembu ahlukene, lezo zaseningizimu, ezasenyakatho nezama-coral atoll. Zakhiwa ngumsebenzi wentaba-mlilo kanti iziqhingi ezisenyakatho ziyiqembu elidala kunawo wonke. Isimo sezulu siyashisa futhi kusukela ngoMashi kuya kuDisemba basendleleni yesiphepho.
Iqiniso ukuthi bayiziqhingi ezikude nakho konke futhi lokho kusongela umnotho wabo ngoba bathembele kakhulu ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, isimo sezulu asisizi ngoba nazo zingaphansi kwesimo sezulu esiningi esingesihle. Kusukela izinto ezingama-90s sezithuthuke kancane ngoba sezikhona izindawo zentela.
Ezokuvakasha eziqhingini zaseCook
Ufika eziqhingini ngendiza I-Air New Zeland, i-Virgin Australia noma iJetstar. Kunezindiza eziningi ezisuka e-Auckland nase-Australia zidlula enhlokodolobha yaseNew Zealand. Ungafika futhi usuka eLos Angeles noma uvela kwamanye amadolobha anikezwa yinkampani yezindiza yaseNew Zealand. Ngemuva kwalokho, kusuka esiqhingini kuya esiqhingini ungathatha izikebhe noma indiza nge I-Air Rarotonga.
Isiqhingi esinesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba siyindlela yokungena kwabapheki: Isiqhingi saseRarotonga. Kungamakhilomitha angama-32 kuphela ukuzungeza futhi kungahanjwa ngokushesha ngemizuzu engama-40 ngemoto. Noma kunjalo, inezindawo ezinhle nezinhlobonhlobo futhi igxila ezindaweni eziningi zokudlela, izindawo zokuhlala nemisebenzi.
Esinye isiqhingi esihle I-Aitutaki, el Izulu emhlabeni. Kusemizuzwini engu-50 kuphela ukusuka eRarotonga, imise okonxantathu futhi kungumqhele wamakhorali enolwandle lwangaphakathi oluluhlaza olugcwele iziqhingana ezincane. Kuyisiqhingi sesibili esivakashelwa kakhulu ngabapheki futhi imvamisa indawo yehoneymoon.
Ungahamba nge-kayaking, ushise ilanga emabhishi amahle esihlabathi esimhlophe, nge-kite surf, uyodoba, u-snorkel kanye ne-scuba diving, ugibele isithuthuthu noma ibhayisikili noma uhlale ngqo lapha ube nakho konke okuseduze isikhathi eside.
Atiu kuyisiqhingi esineminyaka engaphezu kwezigidi eziyisishiyagalombili ubudala. Ingabe i- ihlathi kanye nesiqhingi esishisayo uhhafu kasayizi weRarotonga. Nayi imvelo, hhayi impucuko. Amathilomu nje ambalwa ezigodini zawo ezinhlanu ezisenkabeni. Ikhofi le-organic litshaliwe futhi kukhona i-vibe enhle ebuyiselwe emuva.
Ufika kanjani lapho? Endizeni yemizuzu engama-45 ukusuka eRarotonga noma e-Aitutaki. Kusukela esiqhingini sokuqala kunezindiza ezintathu ngesonto, ngoMgqibelo, ngoMsombuluko nangoLwesithathu. Kusukela kwesesibili kukhona nezindiza ezintathu kodwa ngoLwesihlanu, ngoMsombuluko nangoLwesithathu nge-Air Rarotonga.
IMangaia Kuyisiqhingi okumele ngabe sineminyaka eyizigidi eziyi-18 ubudala, ngakho-ke kuyisiqhingi esidala kunazo zonke ePacific. Kuyisiqhingi sesibili ngobukhulu saseCook futhi indiza yemizuzu engama-40 kuphela ukusuka eRarotonga. Kungobuhle bemvelo obuqand 'ikhanda, ngamadwala ama-coral, izimila eziluhlaza, amabhishi anamanzi acwebezela njengekristalu, imigede ekhangayo, ukushona kwelanga okuhle, izinsalela zomkhumbi owaphuka ngo-1904 nezimakethe zendawo ezimibalabala.
La Isiqhingi saseMauke, "Lapho inhliziyo yami iphumule khona," is a ingadi esiqhingini lapho kunezimbali nezithelo eziningi. Lapha kufanele uvakashele uMgede Wasolwandle osogwini olusempumalanga, lapho uphahla lwalo luhlunga khona ilanga futhi lunikeze ukucwazimula okuluhlaza okwesibhakabhaka emanzini. Itholakala kuphela emanzini aphansi. Kukhona nezinsalela zomkhumbi, iTe Kou Maru, umkhumbi owacwila ngo-2010.
La Isiqhingi saseMitiaro kuyisiqhingi esihle futhi esihlukile, namachibi emvelo nemigede ngaphansi komhlabas. Phambilini lesi siqhingi esincane sasiyintaba-mlilo kodwa sangena olwandle futhi saba ama-coral atoll. Lesi sakhiwo sokwakheka komhlaba sikunikeze ukukhululeka okuhle nokufanele ukukuhlola. Kuhlala abantu abangama-200, bafudumele kakhulu, ufika ngendiza futhi ngokujwayelekile ungaqasha iphakethe lendawo yokuhlala nezokuvakasha.
Lezi iziqhingi ezaziwa kakhulu eziQhingini zaseCook, kepha impela zikhona ezinye iziqhingi: Rakahanga, Manihiki, Pukapuka, Palmerston, Penrhyn, Takutea, Nassau, Suwarrow, Manuae... yizingcingo iziqhingi ezingaphandle, ekhangayo, ehlane futhi eyihlane futhi engonakalisiwe. Kuneziqhingi eziyisishiyagalombili sezizonke, eziyisikhombisa ngaphakathi kweqembu eliseningizimu nezinye eziyisikhombisa ezisenyakatho. Kunezindiza zasendaweni ezifika kweminye bese kufika eminye imikhumbi.
Ziyiziqhingi ezingavamisile ukuhanjwa ngakho-ke uma ufuna ukuzizwa kahle ukude nesixuku esihlanyayo kufanele ufike lapha, olwandle olude oluseNingizimu Pacific. Ekugcineni, i- indawo yokuhlala eziqhingini zaseCookKwezokuvakasha, kuyehluka futhi iningi lisemaphethelweni amanzi. Bangu izindawo zokungcebeleka, izindlu zikanokusho, amahhotela, indlu eqashisayo. Ningahamba njengomndeni, niye ezindlini ezinamakhishi nakho konke, noma njengombhangqwana uye ezindaweni zokungcebeleka zikanokusho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqhingi » Ukuhambela iziQhingi zaseCook
Amaqhinga ayi-7 ohambo lwemoto ebusika